ATM စက် နှစ်ခုမှ ငွေထုတ်ကတ် အတုဖြင့် ငွေများ ခိုးထုတ်ခဲ့သူ ဘူဂေးရီးယား နိုင်ငံသားကို ငွေကျပ် ၄၉၂ သိန်းကျော်နှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိ | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»ATM စက် နှစ်ခုမှ ငွေထုတ်ကတ် အတုဖြင့် ငွေများ ခိုးထုတ်ခဲ့သူ ဘူဂေးရီးယား နိုင်ငံသားကို ငွေကျပ် ၄၉၂ သိန်းကျော်နှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိ	Leaveacomment
ATM စက် နှစ်ခုမှ ငွေထုတ်ကတ် အတုဖြင့် ငွေများ ခိုးထုတ်ခဲ့သူ ဘူဂေးရီးယား နိုင်ငံသားကို ငွေကျပ် ၄၉၂ သိန်းကျော်နှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိ	Posted by danyawadi on December 11, 2015 in သတင်းများ	ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားအား သက် သေခံ ငွေစက္ကူများနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်
ကမာရွတ်မြို့ နယ် KBZ ဘဏ်၏ ATM စက်နှစ်ခုမှ ငွေဖြည့်ကတ် အတုများဖြင့် ငွေများခိုးထုတ်ယူခဲ့သည့် ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားအား ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက် အစောပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီးကျော်ထွဋ် ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
၎င်းကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ City Star Hotel အခန်းနံပါတ် ၄၀၃ တွင် ငွေကျပ် ၄၉၂ သိန်းကျော်ဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်က ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM ကတ်ဌာနတွင် ငွေလဲလှယ်/ဖြည့်တင်းသည့် ၀န်ထမ်းဖြစ်သူ ကို……. (၂၅)နှစ်သည် လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာရှေ့နှင့် လှည်းတန်းစင်တာ ရှေ့တွင်ရှိသည့် ATM စက်များရှေ့တွင် TKMAXX တစ်ကတ်စီ တွေ့ရှိသဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM ကတ်ဌာနမှ လက်ထောက်မန်နေဂျာ ဖြစ်သူအား အကြောင်းကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM ကတ် ဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူအချို့မှ ယင်းကတ်နှစ်ကတ်အား IT ဌာနတွင် စစ်ဆေး ရာ ဗီဇာကတ် Data များ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။
ထိုသို့ စစ်ဆေးချက်များအရ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ညနေ ၃ နာရီကျော်ခန့်တွင် လှည်းတန်း စင်တာရှိ ATM စက်နှင့် လှည်းတန်းစိန်ဂေဟာ ရှေ့ရှိ ATM စက်တို့တွင် ဘူဂေးရီးယား နိုင်ငံသားတစ်ဦးမှ VISA ကတ်အတု၊ MASTRO ကတ်အတုနှင့် MASTER ကတ်အတု တို့ဖြင့် စုစုပေါင်းငွေ ၁၈ သိန်းအား ထုတ်ယူသွားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ငွေထုတ်ကတ် အတုများဖြင့် ငွေများ လိမ်လည် ထုတ်ယူသွားသည့် ဘူဂေးရီးယား နိုင်ငံသားအား ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM ကတ်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက တရားလိုပြုလုပ်ပြီး ကမာရွတ်မြို့မ ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် (ပ)၄၉၆/၂၀၁၅ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၈၀/၄၆၈ ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားပြီး တရားခံ ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပြီး ၎င်းမှာ ယခု ကျူးလွန်သည့် ခိုးမှုတင် မကဘဲ အခြား ခိုးမှုများပါ ကျူးလွန်ထားသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကနဦး စစ်ဆေးချက် အရ သိရသည်။
← စီးကရက်တစ်လိပ်မှာ ပါဝင်တာတွေ သင်သိပါသလား ?	တူရကီနိုင်ငံသား အားလုံး အီရတ်နိုင်ငံမှ ချက်ချင်းထွက်ခွာရန် တူရကီသတိပေး →